YRSM13044 မင်္ဂလာဆောင်ဦးထုပ်, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRSM13044 2) ပစ္စည်း: Sinamay 3) Size: 57CM 4) အားလုံးအရောင်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်လည်း OEM နိုင်ပါတယ်။ ဦးထုပ်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျိုး, Dress ဦးထုပ်, organza ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, ဒါဘီဦးထုပ်, အခါသမယဦးထုပ်, မင်္ဂလာဆောင်ဦးထုပ်, ပြိုင်ပွဲထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွက် speciallized စက်ရုံ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, sinamay စိတ်ဝင်စားဖွယ်, ကုလားကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်, pillbox စိတ်ဝင်စားဖွယ်, သတို့သမီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ခံစားခဲ့ရ ကော့တေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်, ခံစားခဲ့ဦးထုပ်, သိုးမွှေးဦးထုပ်, Cloche ဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်, snapback ဦးထုပ်, trucker ဦးထုပ်, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, ဇာထိုးပန်းထိုးဦးထုပ်, Bucket ဦးထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောက်ရိုးဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, Fedora ဦးထုပ်, trilby ဦးထုပ် , bandana, etc ။ အထူးသဖြင့်ဥရောပ, ဗြိတိန်, အီတလီ, ပြင်သစ်, တောင်အမေရိက, မြောက်အမေရိက, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, etc .. Skype အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်: yrhat2012 QQ: 2313228912, E-mail: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း : + 86-13267188969
YRBH13022 bandana, မှော် bandana, headband ရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRBH13022 2) ပစ္စည်း: acrylic / ဝါဂွမ်း 3) Size: 54-58cm 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်လည်း OEM 8 နိုင်ပါတယ်) ဒီ bandana headband, handguard အဘို့, hairband အဘို့, sweatband အဘို့, စသည်တို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ဦးထုပ်, bandana, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, heaband, Bucket ဦးထုပ်,5panel ကဦးထုပ်, snapback, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမျိုး, ဖြီးဝါဂွမ်းထုပ်, ပြောက်ကျားဦးထုပ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမျက်နှာထုပ်ပန်ကာ, ပန်ကာဦးထုပ်, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်အတွက် speciallized စက်ရုံ , ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, အထူးသဖြင့်ဥရောပ၌, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်စသည်တို့ကိုဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, ခံစားခဲ့များနှင့်စသည်တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, .. Skype: yrhat2012 QQ : 2313228912, E-mail: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း: + 86-13267188969
YRBH13021 bandana, မှော် bandana, headband ရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRBH13021 2) ပစ္စည်း: acrylic / ဝါဂွမ်း 3) Size: 54-58cm 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်လည်း OEM 8 နိုင်ပါတယ်) ဒီ bandana headband, handguard အဘို့, hairband အဘို့, sweatband အဘို့, စသည်တို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ဦးထုပ်, bandana, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, heaband, Bucket ဦးထုပ်,5panel ကဦးထုပ်, snapback, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမျိုး, ဖြီးဝါဂွမ်းထုပ်, ပြောက်ကျားဦးထုပ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမျက်နှာထုပ်ပန်ကာ, ပန်ကာဦးထုပ်, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်အတွက် speciallized စက်ရုံ , ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, အထူးသဖြင့်ဥရောပ၌, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်စသည်တို့ကိုဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, ခံစားခဲ့များနှင့်စသည်တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, .. Skype: yrhat2012 QQ : 2313228912, E-mail: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း: + 86-13267188969
YRBH13020 bandana, မှော် bandana, headband ရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRBH13020 2) ပစ္စည်း: acrylic / ဝါဂွမ်း 3) Size: 54-58cm 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်လည်း OEM 8 နိုင်ပါတယ်) ဒီ bandana headband, handguard အဘို့, hairband အဘို့, sweatband အဘို့, စသည်တို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ဦးထုပ်, bandana, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, heaband, Bucket ဦးထုပ်,5panel ကဦးထုပ်, snapback, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမျိုး, ဖြီးဝါဂွမ်းထုပ်, ပြောက်ကျားဦးထုပ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမျက်နှာထုပ်ပန်ကာ, ပန်ကာဦးထုပ်, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်အတွက် speciallized စက်ရုံ , ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, အထူးသဖြင့်ဥရောပ၌, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်စသည်တို့ကိုဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, ခံစားခဲ့များနှင့်စသည်တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, .. Skype: yrhat2012 QQ : 2313228912, E-mail: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း: + 86-13267188969
YRBH13015 bandana, မှော် bandana, headband ရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRBH13015 2) ပစ္စည်း: acrylic / ဝါဂွမ်း 3) Size: 54-58cm 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်လည်း OEM 8 နိုင်ပါတယ်) ဒီ bandana headband, handguard အဘို့, hairband အဘို့, sweatband အဘို့, စသည်တို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ဦးထုပ်, bandana, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, heaband, Bucket ဦးထုပ်,5panel ကဦးထုပ်, snapback, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမျိုး, ဖြီးဝါဂွမ်းထုပ်, ပြောက်ကျားဦးထုပ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမျက်နှာထုပ်ပန်ကာ, ပန်ကာဦးထုပ်, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်အတွက် speciallized စက်ရုံ , ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, အထူးသဖြင့်ဥရောပ၌, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်စသည်တို့ကိုဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, ခံစားခဲ့များနှင့်စသည်တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, .. Skype: yrhat2012 QQ : 2313228912, E-mail: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း: + 86-13267188969
YRBH13014 bandana, မှော် bandana, headand ရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRBH13014 2) ပစ္စည်း: acrylic / ဝါဂွမ်း 3) Size: 54-58cm 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်လည်း OEM 8 နိုင်ပါတယ်) ဒီ bandana headband, handguard အဘို့, hairband အဘို့, sweatband အဘို့, စသည်တို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ဦးထုပ်, bandana, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, heaband, Bucket ဦးထုပ်,5panel ကဦးထုပ်, snapback, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမျိုး, ဖြီးဝါဂွမ်းထုပ်, ပြောက်ကျားဦးထုပ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမျက်နှာထုပ်ပန်ကာ, ပန်ကာဦးထုပ်, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်အတွက် speciallized စက်ရုံ , ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, အထူးသဖြင့်ဥရောပ၌, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်စသည်တို့ကိုဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, ခံစားခဲ့များနှင့်စသည်တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, .. Skype: yrhat2012 QQ : 2313228912, E-mail: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း: + 86-13267188969
YRSM13131 sinamay ဦးထုပ်, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, အခါသမယဦးထုပ်
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRSM13131 2) ပစ္စည်း: Sinamay 3) Size: 57CM 4) အားလုံးအရောင်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန် 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ကြိုဆိုနေကြသည်ကိုလည်းဦးထုပ်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျိုးစုံအတွက် speciallized OEM အဆိုပါစက်ရုံ, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ပါတယ်, ဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်ခံစားခဲ့ အဆိုပါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးရေပုံးစသည်တို့ကိုဦးထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer များ, အထူးသဖြင့်စသည်တို့ကိုဥရောပ, တောင်အမေရိက, မြောက်အမေရိက, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှအတွက် .. နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝငျကျေးဇူးပြုပြီး http: // yrgyhat .cn.alibaba.com Skype: yrhat2012 QQ: 2313228912 Email: 126.com မှာ rszz11
YRFC14167sinamay ဒါဘီ disc ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRFC14167 2) ပစ္စည်း: Sinamay 3) Size: မည်သည့်အရွယ်အစား 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန် 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ကိုလည်းဦးထုပ်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျိုးစုံအတွက် speciallized OEM အဆိုပါစက်ရုံရှိနိုင်ပါသည်ကြိုဆိုကြသည်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, sinamay စိတ်ဝင်စားဖွယ်, pillbox စိတ်ဝင်စားဖွယ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, headpiece, ကုလားကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်, ပိုက်ကွန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်, သတို့သမီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ခံစားခဲ့ရ ကော့တေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်, broaches, tiaras, Dress ဦးထုပ်, Sinamay ဦးထုပ်, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဦးထုပ်, အခါသမယဦးထုပ်, မင်္ဂလာဆောင်ဦးထုပ်, ဒါဘီဦးထုပ်, ပြိုင်ပွဲထုပ်, organza ဦးထုပ်, ဒါဘီဦးထုပ်, ကော့တေးထုပ်, ဦးထုပ်ခံစားခဲ့, သိုးမွှေးဦးထုပ်, Cloche ဦးထုပ်, အားကစားထုပ်, ဘေ့စဘော အထူးသဖြင့်ဥရောပ, ဗြိတိန်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးဦးထုပ်, snapback ဦးထုပ်, trucker ဦးထုပ်, Beanie, ထိုးပြီးဦးထုပ်, ဇာထိုးပန်းထိုးဦးထုပ်, Bucket ဦးထုပ်စတာတွေ, Straw ဦးထုပ်, စက္ကူကောက်ရိုးဦးထုပ်, ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်, fodera ဦးထုပ်, trilby ဦးထုပ်, bandana, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer များ, , အီတလီ, ပြင်သစ်, တောင်အမေရိက, မြောက်အမေရိက, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, အာရှ, etc ..
YRFC11087 စိတ်ဝင်စားဖွယ်, headwear, ဆံပင်အဆင်တန်ဆာကိုရောင်းချ
1) Style ကိုအဘယ်သူမျှမ .: YRFC11087 2) ပစ္စည်း: Sinamay 3) Size: မည်သည့်အရွယ်အစား 4) အားလုံးအရောင်များ avaliable ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ 5) ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ 6) သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကြိုဆို 7) ဖောက်သည်ပုံနဲ့နမူနာကြိုဆိုနေကြသည်ဖြစ်ကြသည်ကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့စသည်တို့ကိုဦးထုပ်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျိုးစုံအတွက် speciallized OEM အဆိုပါစက်ရုံ, Sinamay ဦးထုပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်, ဦးထုပ်ခံစားခဲ့, အားကစားထုပ်, Straw ဦးထုပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer များရှိနိုင်ပါသည် အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်, သြစတြေးလျ, တောင်အာဖရိက, စသည်တို့အတွက် .. နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝငျပါ http://yrgyhat.cn.alibaba.com Skype: yrhat2012 MSN ကို: luluice0872009 hotmail.com (မှာ) QQ: 2313228912 E-mail ကို: rszz11 (မှာ) 126.com မိုဘိုင်း: + 86-13267188969